Latest revision as of 05:20, 9 November 2019 (view source)
In March 2009 he accepted an appointment into the Zimbabwean civil service as Principal Director in the Office of then Deputy Prime Minister [[Arthur Mutambara]]. He held this position until July 2013 when he was elected to represent Gokwe Sengwa Constituency in the [[Parliament of Zimbabwe|National Assembly]]. After the election, he was appointed Deputy Minister for Primary and Secondary Education in September 2013.<ref name="Govt"/> In 2017 when President [[Emmerson Mnangagwa]] appointed his cabinet, Mavima was appointed as the Minister of Primary and Secondary Education.
In March 2009 he accepted an appointment into the Zimbabwean civil service as Principal Director in the Office of then Deputy Prime Minister [[Arthur Mutambara]]. He held this position until July 2013 when he was elected to represent Gokwe Sengwa Constituency in the [[Parliament of Zimbabwe|National Assembly]]. After the election, he was appointed Deputy Minister for Primary and Secondary Education in September 2013.<ref name="Govt"/> In 2017 when President [[Emmerson Mnangagwa]] appointed his cabinet, Mavima was appointed as the Minister of Primary and Secondary Education. Following a cabinet reshuffle on 8 November 2019 Mavima was appointed Minister of Public Service, Labour and Social Welfare.
==Exam Resit Lawsuit==
Latest revision as of 05:20, 9 November 2019